Momba anay - XIAMEN GACHN TECHNOLOGY CO., LTD.
Tongasoa eto amin'ny GACHN
Teknolojia Gachn (Kaody stock: 832368)mifantoka amin'ny sehatra famokarana fitaovana marani-tsaina ary miezaka manamboatra ny fonosana vita amin'ny fonosana ho zava-misy ho an'ny mpanjifantsika. Cachn dia nitana andraikitra lehibe tamin'ny fametrahana ny milina fanamboarana taratasy fanamboarana trano sy fitaovana amin'ny alàlan'ny fanomezana an-tsakany sy an-davany ny teknolojia sy ny sisin'ny serivisy.
Teknolojia Gachn mamaly amin'ny fomba hentitra ny paikadim-pirenena "Mind in China 2025", mikendry ny fanamboarana fitaovana marani-tsaina manerantany ary mametraka ny firehetam-po sy ny ezaka ho lasa "orinasa tsy misy pentina" ho zava-misy ho an'ny mpanjifantsika.
Amin'izao vanim-potoana izao, eo ambanin'ny marika GACHN ®, manana milina fametrahan-tsofina-famandrihana automatique feno sy milina fonosana fonosana turnkey ho an'ny vokatra toy ny napkin amin'ny fahadiovana, lampin-jaza ary lamba famaohana sy mando sy ny sisa. Ambonin'izany, mikasa ny hanampy ny fonosana sakafo sy ny fonosana kosmetika amin'ny portfolio portfolio izahay.
Teknolojia Gachn naorina tamin'ny taona 2011. Amin'ny Gachn dia mifikitra amin'ny filozofia ara-barotra "mpanjifa" isika rehetra. Isan-taona maherin'ny 10% amin'ny fidiram-bola isan-taona dia mandeha amin'ny famatsiam-bola R&D. Ao amin'ny Gachn, nametraka ny aintsika manontolo sy ny saintsika rehetra izahay mba hividianana lanja ny mpanjifa. Amin'ny dong toy izany, ny vokatra sy serivisy marika GACHN® dia eken'ny besinimaro ny tsena. Ho setriny, ny orinasa dia mahatsapa fotoana fitomboana mahafinaritra ihany koa miaraka amin'ny fitomboan'ny vola isan-taona mihoatra ny 50%. Amin'izao fotoana izao, ny orinasa dia manana ny famokarana vokatra isan-taona izay mihoatra ny 200 seta. Nandritra ny taona maro izay, Gachn dia namorona ny tenany ho ilay milina fonosana sy mpanamboatra fitaovana ho an'ny orinasa famokarana taratasy an-trano.
Politika: Business ifantohana
Mision: Manamboatra ireo vokatra tonga lafatra am-pahakingana ary mamorona valus ho an'ny mpanjifa.
Ny fahitantsika: ho marika isa tokana manerantany.
Soatoavina: Fitsarana, Rush, Lavorary, Win-fandresena
Tsy manavakavaka: fifaninanana tsy miangatra, mitady fahamarinana amin'ny zava-misy
Rosy: ho ohatra, malala handray andraikitra, chanllange ny fitsipika
Tonga lafatra: fanatsarana mitohy, manatsara ny fahatanterahana ho tonga lafatra, aza ajanona mihitsy ny fandrosoana
Fandresena: win-win with customer, win-win with staff, win-win with mpamatsy.
Vokatry ny kapoka sy vahaolana fonosin'i Gachn Technology:
1,milina fanamboarana miendrika automatique sy famonosana vahaolana ho an'ny napkin madio sy lambam-pandriana
2 machine milina fanisanam-bokatra mandeha ho azy sy vahaolana vahaolana fanadiovana zaza
3 、 Mamandoana mando haingana haingam-pamokarana haingam-pamokarana sy milina maromaro
4 、 Malina vita amin'ny fonosana vita amin'ny tarehy ho an'ny singe sy làlana roa, milina fonosana fonosana
5 line Serasera famokarana haingam-pandeha avo lenta, fandriam-bidy haingam-pandeha ho an'ny fandroana azo ampiasaina
6 、 Famokarana haingam-pandeha haingam-pandeha sy tsipika fofona ho an'ny saron-tava, mason-tava haingam-pandeha ambony sy famenoana masinina
Mba hitazonana ny lalan'ny tsena dia manatsara hatrany ny tenantsika isika ary mahatonga antsika ho lavorary.
Raisinay tamim-pitiavana ireo namanay eran'izao tontolo izao mba hifandray aminay amin'ny fiaraha-miasa maharitra mandritra ny fotoana maharitra. Miandrandra am-pahatsorana ny fametrahana ny fiaraha-miasa amin'ny win-win miaraka aminao amin'ny ho avy!